Fraport Group: Ego ha nwetara na uru net na-abawanye nke ukwuu n'ime ọnwa itoolu nke 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Fraport Group: Ego ha nwetara na uru net na-abawanye nke ukwuu n'ime ọnwa itoolu nke 2021
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Fraport Group: Ego ha nwetara na uru net na-abawanye nke ukwuu n'ime ọnwa itoolu nke 2021.
N'ịgbake site na mgbake pụtara ìhè na njem ezumike n'oge oge ọkọchị, ego ha nwetara gbagoro na nkeji nke atọ nke 2021 site na 79.5 pasent ruo nde € 633.8 ma e jiri ya tụnyere € 353.1 nde n'otu nkeji nkeji na 2020.
Mgbake okporo ụzọ ụgbọ elu na-eduga n'ịba ụba ego ha nwetara na ọnwa 9 mbụ nke 2021.
Ọchịchọ maka njem ezumike n'oge ọnwa okpomọkụ siri ike.
Nsonaazụ abawanyela n'ihi nkwụghachi ụgwọ ego anatara maka mfu metụtara ọrịa na-efe efe kpatara na ọdụ ụgbọ elu dị iche iche.
Companylọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ Fraport nwetara mmụba dị ukwuu na ego ha nwetara yana nsonaazụ Group (uru netwọlụ) n'ime nkeji nke atọ na ọnwa itoolu mbụ (kwụsịrị Septemba 30) nke afọ azụmaahịa 2021. Ihe ndị na-enye aka na mmụba a gụnyere ịrụ ọrụ dị mma na ọtụtụ mmetụta nkwụsịtụ. Amụma maka oge oyi na-abịanụ nwekwara nchekwube. Ya mere, Fraport emegharịla echiche ya nke afọ zuru oke maka ego ha ga enweta na ọnụ ọgụgụ isi ego ndị ọzọ dị ntakịrị elu. A na-ebu amụma na mmepe okporo ụzọ na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt ga-eru mpaghara elu nke oke arụmọrụ a na-atụ anya ya, n'etiti ndị njem na-erughị nde 20 ruo nde 25.
Fraport Onye isi ala, Dr. Stefan Schulte, kọwara: “Site na nnukwu mfu enwetara na 2020 yana ịrị elu dị elu nke ụgwọ, anyị na-ahụ ugbu a atụmanya na-egbuke egbuke n'ihu. Ọchịchọ maka njem ezumike n'oge ọnwa okpomọkụ siri ike. Ọzọkwa, nsonaazụ anyị abawanyela n'ihi nkwụghachi ụgwọ ego anatara maka mfu metụtara ọrịa na-efe efe kpatara na ọdụ ụgbọ elu Group dị iche iche. Ugbu a, anyị na-atụkwa anya ka okporo ụzọ intercontinental ga-eji nwayọọ nwayọọ gbakee - nke mmeghe nke ókèala US na-adịbeghị anya kwadoro. N'ihi ya, anyị na-enwekwu nchekwube banyere oge oyi karịa ka anyị nwere nanị ọnwa ole na ole gara aga. Ka o sina dị, ọ ka dị anya n'ihu ruo mgbe anyị rutere ọkwa ndị njem butere ọrịa ahụ ọzọ wee nwee ike ibelata ụgwọ anyị ji nke ukwuu. "
Nkeji nke atọ: ego ha nwetara na uru net na-eto nke ọma
N'ịgbake site na mgbake a na-ahụ anya na njem ezumike n'oge oge ọkọchị, ego ha nwetara rịrị elu na nkeji nke atọ nke 2021 site na pasent 79.5 ruo nde euro 633.8 ma e jiri ya tụnyere € 353.1 nde n'otu nkeji nkeji na 2020 (a gbanwee ụkpụrụ abụọ ahụ maka nkwekọrịta metụtara IFRIC 12. ego ha nwetara site na usoro ihe owuwu na mgbasawanye na Fraport's enyemaka n'ụwa nile). EBITDA ruru nde €288.6 na nkeji nke atọ, site na mwepu nde €250.3 na Q3/2020. Agbanyeghị, uru a na-egosipụtakwa ọtụtụ nsonaazụ otu ụzọ: N'ime nkeji nke atọ nke 2020, ego enwetara emetụtara nke ọma site na imepụta usoro maka mbelata ndị ọrụ ruru nde €279.5. N'afọ a, n'aka nke ya, onyinye dị mma na nkeji nke atọ sitere na ụgwọ ọrụ metụtara COVID nyere ndị enyemaka anyị na US, Slovenia na Gris - nke kwalitere "Ego Ego Ndị Ọzọ" nke otu ahụ site na ihe dị ka nde € 30. Na-edozi maka mmetụta ndị a na-apụ apụ, Fraport ka biputere uto EBITDA siri ike nke pasenti 785.6 ruo nde €258.6 na nkeji nke atọ nke 2021, karịa nde €29.2 n'otu oge ahụ n'afọ gara aga. Nsonaazụ otu ahụ - ma ọ bụ uru net - tolitere ruo nde euro 102.6 na Q3/2021 (gụnyere mmetụta ndị a kpọtụrụ aha na mbụ), ma e jiri ya tụnyere nde euro 305.8 na Q3/2020.
Ọnwa itoolu mbụ nke 2021: Fraport nwetara nsonaazụ arụ ọrụ siri ike, na-akwado site na mmetụta dị mma otu nkwụsị
N'ime ọnwa itoolu mbụ nke afọ dị ugbu a, ego ndị otu gbagoro site na pasenti 18.3 kwa afọ ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri euro 1.4 (ewezuga mmetụta IFRIC 12). Tinyere uto ndị njem na mpụga Frankfurt, ego enwetara emetụtara nke ọma site na nkwekọrịta emere na nkeji mbụ nke 2021 n'etiti Fraport na ndị uwe ojii Federal German (Bundespolizei) maka ụgwọ ọrụ nchekwa ụgbọ elu nke Fraport nyere na mbụ. Nkwekọrịta ahụ wetara ego agbakwunyere €57.8 nde. Mmetụta ndị ọzọ na-apụ apụ nwekwara mmetụta dị mma n'akụkụ ego: Ndị a gụnyere nkwụghachi ụgwọ sitere na gọọmentị German na steeti Hesse nyere Fraport maka idobe ịdị njikere ịrụ ọrụ ọdụ ụgbọ elu Frankfurt n'oge mkpọchi, yana ụgwọ ọrụ ọrịa na-enye ndị enyemaka otu na Gris. nke US na Slovenia - nke nyere ego ruru nde euro 275.1 na Fraport's “Ndị ọzọ na-enweta ego”. Ejikọtara ya na nkwụghachi ụgwọ sitere n'aka ndị uwe ojii Federal German, mmetụta ndị a na-adịghị agbanwe agbanwe nyere ego ruru nde €332.9 na ego ndị ọzọ, yana mmetụta dị mma kwekọrọ na nsonaazụ ọrụ (EBITDA).
November 10, 2021 na 08: 37
N'ime anyị Bioenergy & Azụmahịa ndị ọzọ nwetara ego dị elu nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ. Ọ masịrị m ịgụ akwụkwọ a nke ọma iji chọọ ide akụkọ a magburu onwe ya na ntinye aka na-enye aka ekele maka ịkekọrịta.